Bolgaria: Hetsi-panoherana manohitra ny herisetra nataon’ny Neo-Nazi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2018 3:31 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Italiano, srpski, Español, বাংলা, English
(Marihina fa tamin'ny 16 Jona 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny 6 Jona 2010, nisy hetsi-panoherana natao tany Sofia ho fanohanana ny zon'ireo mpitsoa-ponenana sy ny mpifindra monina tany Bolgaria. I Svetla Encheva sy ireo mpikatroka hafa no nikarakara izany mba hanohanana ny zon'ny mpifindra monina. Natao teo anoloan'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana “Busmantzi” ny hetsi-panoherana.
Nisy andian'olona nanasola loha nanafika ireo olona maro tao anatin'ny tramway iray ho any amin'ny hetsika taloha kelin'ny nanombohan'ny hetsi-panoherana. Mbola teo am-panadihadiana ny hetsika ny mpitandro filaminana ary olona mihoatra ny 20 no nahiahiana.
Ny pejiko Facebook nisy hafatra momba ny hetsi-panoherana
Ny 10 jona 2010, nisy ny fivoriana faharoa nokarakaraina, ary tamin'izany no nanoheran'ireo mpikatroka ny neo-Nazisma sy ny fanafihana ireo olom-pirenena nanao hetsika am-pilaminana. Nanomboka tao amin'ny Facebook ny hetsika, izay nahitana ireo mpisera nifampizara ny hafatra manokana niaraka tamin'ny fotoana sy ny toerana nanaovana ny fivoriana.
Fotoana fohy taorian'ny tamin'ny 6 ora hariva, voasakana ny fifamoivoizana tao Sofia niaraka tamin'ny hirahira hoe “Any am-ponja ny Nazis “, “Tsy fanehoan-kevitra ny Fasisma fa heloka bevava”, “Sady tsy mamela heloka izahay no tsy manadino ” ary ny sora-baventy “Mamono ny tsy firaharahiana”, “Ampy izay ny fanavakavaham-bolonkoditra”.
Hoy i Lidia Stoykova raha nanoratra momba ilay hetsi-panoherana tao amin'ny bilaoginy:
[…] Na dia eo aza ny hetsi-panoherana, dia misy ny tanora ato amin'ity firenena ity no mamaritra ny tenany amin'ny fomba hafa ary manafika ireo mpiray tanindrazana aminy mainty hoditra kokoa sy ireo vahiny, sy ireo olona hafa izay lazain'izy ireo fa pelaka. Lazaiko tsotra izao fa Nazis sy fasista ireo tovolahy ireo . […]
[…] Heveriko fa olana goavana ny fisian'ny olona toy izany ary nandany fotoana betsaka aho niresaka momba ny fiverenan'ny fasisma indray ato amin'ny firenentsika, koa satria anefa mifandray amin'ireo mpitsoa-ponenana ity olana ity, izay tohanantsika , dia mihevitra aho ankehitriny fa tokony hifantoka indrindra amin'io olana io isika. Satria tsy dia malaza loatra izany, satria tsy miresaka momba izany loatra isika. […]
Hoy i Borislav Borissov raha nanoratra tao amin'ny bilaoginy:
Ny hetsi-panoherana tao amin'ny Kianja Patriarka Evtimy izay manohitra ny fihetsika matetika ataon'ny Nazi, fasista, ny nasionalista hiringiriny, ny mpanavakava-bolonkoditra, ny mpankahala vahiny sy ny vondrona hafa mitovy amin'izany, ny fikambanana, ny hetsika ary andian-jiolahy mitovy amin'izany no zava-dehibe indrindra nitranga tato anatin'ny 20 taona farany. Tsara ny fisian'ireo olona nihalehibe nandritra io vanim-potoanan'ny tetezamita io izay nitohy am-polo taonany taorian'ny fiafarany. Misy ny finoana hafahafa ao anatin'ny tontolon'ny bilaogy fa zava-baovao ireo krizin'ny fasista sy Nazi ireo .
Tao amin'ny lahatsorany, nanoratra ilay bilaogera Selene hoe:
“Tsy fanehoan-kevitra ny Nazisma fa heloka bevava izany.”
Sarotra ny mino fa mety ho lasa sehatry ny herisetra i Bolgaria amin'ny taonjato faha 21, izay notovozina avy tamin'ny hevitra tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20. Hevitra, izay nitarika tamin'ny Ady Lehibe, ny famonoana olona, ​​ny tobin'ny gadra politika, ny habibiana ary ny fahafatesana tamin'ny endriny marobe.
Nahazo fandrahonana ny bilaogin'i Svetla Encheva:
Mbola tsy ampy ny daroka nahazo anao!
Tsy mbola mazava hoe iza no nanoratra ity fanehoan-kevitra tsy mitonona anarana ity.